မိသားစု Locator - ဂျီပီအက်စ် Tracker APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျီပီအက်စ် & ခရီးသွား Apps ကပ » မိသားစု Locator - ဂျီပီအက်စ် Tracker
မိသားစု Locator - ဂျီပီအက်စ် Tracker APK ကို
Life360 ရဲ့မိသားစု Locator ကလွယ်ကူအရှိဆုံးအရေးပါသူလူတွေကိုချိတ်ဆက်နေဖို့အောင်နေဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာထဲမှာဘဝကိုရိုးရှင်းစွာ။
သင်သည်တတ်နိုင် Life360 နှင့်အတူ:
•အသင်းဖော်, ချစ်ရသူ၏ "စက်ဝိုင်းများ" ဟုခေါ်တွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကအုပ်စုများ Create - အရှိဆုံးအရေးပါအကြင်သူသည်နှင့်အခမဲ့မိသားစု Locator အတွက်သူတို့နှင့်အတူ chat ။
•သင့်စက်ဝိုင်းမှသာမြင်နိုင်မယ့်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကမိသားစုမြေပုံပေါ်တွင်စက်ဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ Real-time တည်နေရာကြည့်ရှုပါ။
•စက်ဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ ( "သင်သည်အဘယ်မှာရှိ?" စာသားများနှောင့်အယှက်ရှင်းလင်း) မှာရောက်လာသို့မဟုတ်နေရာများစွန့်ခွာတဲ့အခါမှာ Real-time သတိပေးချက်လက်ခံ
•အလားတူ apps များပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သောသူတို့အားထက် features တွေနှင့်အကျိုးအမြတ်များပိုမိုကွဲပြားခြားနားခင်းကျင်းခံစားကြည့်ပါ
ချိတ်ဆက်နှင့်သင့်တစျခုလုံးကိုမိသားစုနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းနေနှင့်သင့်မိသားစုဖြစ်ရပ်များနှင့်နေ့စဉ်ဘဝကိုသြဒိနိတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့မျိုးစုံကျမ်းပပျောက်။ မိသားစု Locator သင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များသည်သင်၏ဖုန်းတည်နေရာနှင့် GPS အာရုံခံကိရိယာမှကျေးဇူးတင်စကားမှာ check လုပ်ထားသောအခါတစ်စုံတစ်ယောက်ကနှောင်းပိုင်းတွင်အပြေးလျှင်, မိသားစု Locator လည်းအကြံပေးနိုင်ပါတယ်သင်သတိပေး။
အဆိုပါ Life360 app ကိုသင်၏စက်ဝိုင်းကို join နှင့်၎င်းတို့၏တည်နေရာကိုမျှဝေဖို့သင့်ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံခဲ့သည်ကြသောသူတို့၏အမှ real-time ဘယ်မှာအစီရင်ခံရန် State-Of-The-Art GPS တည်နေရာနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအသင်၏ဖုန်းပေါ်တွင် Life360 မိသားစု Locator app ကို install နှင့်သင့်မိသားစုဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့သူတို့အတိအကျဘယ်နေရာမှာသင်သိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင်သွားလာမှုမြေပုံပေါ်တွင်တစ်မူထူးခြားတဲ့အိုင်ကွန်အဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ နှောင့်အယှက်ပို့ပေးရန်မလိုအပ် "ဘယ်မှာရှိသနည်း, သင်၏ရှိပါတယ်" သို့မဟုတ် "သင့်ရဲ့ ETA ကဘာလဲ?" ကျမ်း, အ Life360 မိသားစု Locator သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်လေ့မရှိ။ အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်စူပါလွယ်ကူအောင်, ငါတို့သည်သင်တို့သင့်မိသားစုတစ်ဦးအဖြစ်ခန့်အပ်တည်နေရာမှာရောက်ရှိယခုအချိန်တွင်သတိပေးပေးပို့!
စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုအဘို့အလို့ငှာ, ငါတို့အနည်းငယ်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်။ မစိုးရိမ်ပါ - သင် account တစ်ခုဖန်တီးသည့်အခါကျနော်တို့ကဒီမြန်ဆန်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သင်ကကူညီပေးပါတယ်။
တည်နေရာ - Life360ashared, ပုဂ္ဂလိကမြေပုံပေါ်တွင်သင်နှင့်သင့်ချစ်ရသူတည်နေရာ။ ဤချိန်ညှိတိကျစွာနဲ့လျင်မြန်စွာတည်နေရာကိုပြသဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
ဖုန်းကိုခွင့်ပြုချက် - Life360 ခလုတ်တစ်ခုတစ်ခုတည်းတွန်းအားပေးအတူဖုန်းကျော်ကတိုက်ရိုက်ကိုယ်စားလှယ်ရန်သင့်အားဆက်သွယ်သောယာဉ်မောင်းစောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့လို့ခေါ်တဲ့ feature ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ရှင်သောကိုယ်စားလှယ်သင်နှင့်သင်ထိုကဲ့သို့သော tows, ခုန်လျက်, lockouts အဖြစ်လမ်းဘေးအခြေအနေများတွင်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာတဲ့သူသိတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်တိုက်မှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ချက်ချင်းအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကိုဆက်ကပ်။ ဖုန်းကိုခွင့်ပြုချက်ကိုတိုက်ရိုက်ကိုယ်စားလှယ်ရန်သင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့တောင်းဆိုတဖြစ်ကြောင်း authenticate ခွင့်ပြုသည်။
Network မှ - ဤအင်တာနက်ကိုသင်ချိတ်ဆက်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကမြေပုံပေါ်တွင်မိသားစုဝင်များနှင့်ထံမှတည်နေရာအချက်အလက်ပေးပို့နှင့်လက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Life360 သုံးပြီးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကျနော်တို့အမြဲတမ်းနောက်ကွယ်မှအပြောင်းအလဲများနှင့်တိုးတက်မှုများအောင်နေ, သင်သည်တစုံတခုကိုလက်လွတ်မသေချာစေရန်ပေါ်တွင်လှည့်သင့်ရဲ့ updates တွေကိုစောင့်ရှောက်ပါ။
- Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု
မိသားစု Locator - ဂျီပီအက်စ် Tracker
39.50 ကို MB
ကျွန်ုပ်၏ကလေးများကိုရှာပါ - ...
မိသားစု GPS စနစ် ...
GPSme - ငါနှင့်…
mLite ဖုန်း ...